Ihe ngosi SASELUX Emere Ihe ngosi Canton Na Guangzhou, Ọktoba 15 ruo 19, 2021
Anyị gosipụtara ọkụ ọkụ mberede, ngwakọta ihe nrịba ama ọpụpụ, onye ọkwọ ụgbọ ala mberede, ọkụ ikuku, ọkụ panel na ngosi. N'ihi covid-19, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-azụ ahịa si mba ọzọ na-abịa ileta Canton Fair.
Ìhè Mberede ọkụ ọkụ ọkụ ọhụrụ nwere isi abụọ na-agbanwe agbanwe (CR-7102)
site na nchịkwa na 21-09-26
SASELUX nwere ọpụrụiche na ọkụ mberede maka ọtụtụ afọ. Na mpaghara a, anyị enwetala ọtụtụ ndị ahịa, dịka Eaton na Naffco. N'oge na -adịbeghị anya, anyị bipụtara ọkụ mberede mberede ọhụrụ. Ọnụahịa ahụ na-asọ mpi: 7.2USD, dabere na nkọwapụta 1000pcs dị ka ndị a: Ntinye ụlọ ịkpụzi plastik.
Mmalite nke mmemme etiti mgbụsị akwụkwọ
Ememe etiti mgbụsị akwụkwọ na-ada na ụbọchị 15 nke ọnwa 8th ọnwa-ọ na-abụkarị na mbido Septemba ruo mbido Ọktoba nke kalenda Gregorian nwere ọnwa zuru oke n'abalị. Ọ bụ oge ndị ezinaụlọ na ndị ha hụrụ n'anya na -ezukọ ma na -anụ ụtọ ọnwa zuru oke - akara ngosi bara ụba ， ...
Ngosi ọkụ ọkụ mberede Guangzhou LED
Ihe ngosi ọkụ ọkụ mba ụwa nke China (Guangzhou) nke 2021 erutela dịka emebere ya, puku kwuru puku ndị ụlọ ọrụ ọkụ na ụdị ama ama gbakọtara ebe a. Ihe ngosi SASELUX dị na 13.2 C08, nke nabatara ọtụtụ nleta mgbasa ozi na ndị ngosi. Ụdị ihe owuwu ...
Bịa mata anyị!
SASELUX guzobere na 2011, dị na Shenzhen, China. Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na ngwaahịa ọkụ mberede, gụnyere ihe ọpụpụ, ọkụ mberede, ndị ọkwọ ụgbọ ala mberede, ihe na -achọpụta anwụrụ ọkụ wdg. Mkpu anwụrụ ọkụ bụ otu n'ime ngwaahịa anyị ugbu a, yana ngwaahịa ọhụrụ ...
Ọnụ ahịa ahịa ọkụ ọkụ mberede, ọnọdụ ụlọ ọrụ na amụma na 2028
Industrylọ ọrụ ọkụ ọkụ mberede ga -ahụ nnukwu mmụba na CAGR siri ike n'oge amụma. Dị ka akụkọ nyocha ọhụụ si dị, mmepe nke ahịa ọkụ ọkụ mberede ka akwadoro nke ukwuu site n'ịbawanye ụba na -achọ ngwaahịa na ọrụ na ụlọ ọrụ a. Ndị ọkachamara ...
Mkpa Ọbịbịa Ogbi/Ọkụ Mberede
Gịnị Mere Ihe ịrịba ama Ọpụpụ ji dị mkpa? Kedu ihe ị ga -eme n'oge ihe mberede? Were ya na gị na ọtụtụ ndị bịara abịa nọ n'ime oghere dịpụrụ adịpụ mgbe ihe na -adịghị mma. Ị nwere ike ịchọta ụzọ ị ga -esi pụọ? Ọ bụrụ na ọkụ gbara, ị ga -enwe ike ịnyagharịa n'ụzọ gị na nchekwa? Ị na -ewu ihe ngosi ọpụpụ? ...